मेनिन्जाइटिस के कारण र लक्षण। – Noor Health Life
मेनिन्जाइटिस के कारण र लक्षण।
विश्व मेनिन्जाइटिस दिवस अप्रिल 24 मा विश्वभर मनाइन्छ। यस दिनमा यस ज्वरोको लक्षण, कारण, उपचार र बच्ने उपायका बारेमा सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन विभिन्न गोष्ठी तथा गोष्ठी आयोजना गरिन्छ । यो ज्वरोले हरेक वर्ष विश्वभर १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई असर गर्ने अनुमान गरिएको छ। मेनिन्जाइटिसले सबै उमेरका मानिसहरूलाई असर गर्न सक्छ, चाहे तिनीहरू जवान होस् वा वृद्ध। समयमै उपचार धेरै महत्त्वपूर्ण छ।ज्वरो खतरनाक स्तरमा पुगेमा संक्रमित बिरामीको ज्यान जान सक्छ, त्यसैले सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ।
प्रकृतिले मानव मस्तिष्क र सेरिबेलमको लागि उत्तम व्यवस्था गरेको छ र तिनीहरूलाई तीनवटा झिल्लीमा भण्डार गरेको छ जसले विभिन्न खतरा र रोगहरूबाट सुरक्षित बनाउँछ। यी झिल्लीहरू टाउकोमा चोट लाग्ने, रगतमा कीटाणुहरू प्रवेश गर्ने, नाक र कानमा संक्रमण र मेनिन्जाइटिसबाट प्रभावित हुन सक्छ।
मेनिन्जाइटिस के लक्षण
1. मेनिन्जाइटिसमा, बिरामीलाई पहिले उच्च ज्वरो आउँछ।
2. यदि बच्चालाई यो ज्वरो छ भने, ऊ लगातार रुन्छ।
3. कुनै पनि कुराले तपाईंलाई खान वा पिउन चाहँदैन।
4. ज्वरो बढ्दै जाँदा, प्रभावित बिरामीलाई आघात हुन थाल्छ।
5. शरीरमा रातो दाग देखा पर्छन्।
६.आँखामा अल्छीपन हट्छ।पलक एकदमै बिस्तारै चल्छ।
7. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्षणहरू मध्ये एक घाँटी नफर्काउनु हो। घाँटी राम्रोसँग निको हुँदैन र बिरामीले घाँटी उठाउन सक्दैन। भविष्यमा मेनिन्जाइटिस कत्तिको खतरनाक हुन सक्छ?
जेनेभा : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले मेनिन्जाइटिस र अन्य कारणले आगामी वर्षमा पाँचमध्ये एक जनालाई कानमा समस्या हुने देखाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेको एक प्रतिवेदनले विश्वमा अहिले धेरै मानिसलाई कानमा समस्या भएको खुलासा गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी प्रतिवेदन
उनका अनुसार मेनिन्जाइटिसको वृद्धि र यसबारे चेतनाको कमी हुनु धेरै गम्भीर हुनसक्छ किनभने मेनिन्जाइटिस सीधै श्रवणशक्तिसँग सम्बन्धित छ।
चिकित्सा विज्ञहरूका अनुसार मेनिन्जाइटिसले मस्तिष्क र श्रवण कोशिकाहरूलाई नराम्ररी असर गर्छ, जसले गर्दा मस्तिष्कमा सन्देश पुग्ने काम काटिन्छ।
डब्लुएचओका विज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक स्थानमा कोलाहल कम गरेर र समयमै चिकित्सा सहायता दिएर मात्र यो गम्भीर अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
डब्लुएचओले सार्वजनिक गरेको पहिलो विश्वव्यापी श्रवण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आगामी तीन दशकहरूमा बहिराहरूको संख्या १.५% भन्दा बढीले बढ्ने छ, अर्थात् पाँचमध्ये एक जनामा ​​श्रवण समस्या हुनेछ।”
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जनसांख्यिकी, ध्वनी प्रदूषण र जनसङ्ख्याको प्रवृत्तिमा भएको वृद्धिका कारण पनि सुन्ने समस्यामा अपेक्षित वृद्धि भएको हो।”
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को प्रतिवेदनले पनि कम आय भएका देशहरूमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमी र चिकित्सा पेशेवरहरूको अभावका कारण सुन्ने क्षमता घट्नुको कारणलाई औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ “यस्ता देशहरूमा 80% मानिसहरूमा कान श्रवण समस्या छ, जसमध्ये अधिकांशले चिकित्सा सेवा प्राप्त गरिरहेका छैनन्, जबकि धनी देशहरूमा जनसंख्या वृद्धिका कारण स्वास्थ्य सेवाको पहुँच छैन।” कृपया। तपाईं थप प्रश्न र उत्तरहरू सहित Noor Health Life लाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। noormedlife@gmail.com